သွေးတိုးရောဂါများအတွက် ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ....လက်တွေ့ပျောက်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... - MM Live News
March 17, 2019 MM Live
တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ခဲ့ပြီးဆေးရုံဆေးခဏ်းတွေသွားကုတယ်မပျောက်ပါ ငွေကုန်လူပန်း ဖြစ်ပြီးအိပ်ရာထဲမှာဘုံးဘုံးလဲပြီး သူကိုယ်သူ(သေ) စာရင်းသွင်းထားတဲ့လူကို ကျွန်တော်တွေ့လို့ဒီဆေးမြီးတိုလေးပေးခဲ့ပါတယ် လူနာကမရုံမှာကြောက်လို့ လူနာကိုမှာခဲ့သေးတယ်။
ဒီဆေးကိုနေ့စဉ်တလတိတိသေက်ဘို့နဲ့. အကယ်၍မပျောက်ခဲ့သော် ဆေးဘိုးကုန်ကျငွေများကို ကျွန်တော်မှပြန်လျော်ပေးမည့် ဂတိလဲပေးခဲ့ပါတယ် နောက်တ.လအကြာမှာ တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့လူနာကို သွားကြည့်တော့ လူနာကလူကောင်းဖြစ်လို့. ဝလို့. စိုလို့. အံ့သြဘွယ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်(၂)လောက်ကပါ ၂၀၁၆…ခုကသွေးတိုးရောဂါကျွန်တော်မှာဖြစ်တယ် သွေးချိန်ကြည့်တော့အောက်သွေး(၁၂၀)အပေါ်သွေး(၁၉၀) ပါဆရာမကဂရုစိုက်ကုဘို့ပြောပြီး သွေးကျဆေးပေးခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်ကတရားစခန်းပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန် တရားစခန်းအကျိုးတော်ဆောင် ဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ ဆေးဖော်ဘို့အချိန်ကမရနဲ့. တရားစခန်းပွဲလဲပြီး အောက်ဖော်ပြမည့် ဆေးမီးတိုကို.(၁၃)ရက်နေ့စဉ်သောက်လိုက်တာ…..
ခုတော့ဗျာ မုန့်ဟင်းခါး ဝက်သားကြိုက်တာစား ယ္ခုစာရေးနေချိန်အထိ(ဒေါင်ဒေါင်လန်.)ဘဲဗျာကဲဆေးနည်းကလွယ်လွယ်လေး ….
(၁)နွားနို့စစ်စစ် ၁. ပိသာ (၂)ကြက်သွန်ဖြူ. (ဥတလုံး)..၇…လုံးနွားနို့ကိုဆူအောင်ကြိုပါ …ပွက်ပွက်ဆူပြီဆိုရင်အခွန်နွှာထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူ(၇)လုံးကိုထည့်ပါ…..
ရောဂါနုလျင်(၁၃ )ရက် သေလု့ဆဲဆဲလူဆိုလျင်ရက်(၃၀)…..ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ ဒီဆေးနည်းလေးကို အများသူငါသိအောင် ဆက်ပြီးဖြန့်ဝေစေချင်ပါတယ်……
ဒီဆေးနည်းလေးကို ဦးနေဝင်းလက်ထက်… လုပ်သားပြည်သူနေ့စဉ်သတင်းစာထဲမှာတွေ့လို့ရောဂါဖြစ်နေသူတွေကို တွေ့တိုင်းပေးပါတယ် …..ခက်တာကတချို့ကပြောသလို မလုပ်ကြတာတွေလဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်.။
ကိုင်းဒီစာကိုတွေ့တဲ့ ရောဂါပျောက်လိုသူအပေါင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုရခက်နေတဲ့ သွေးတိုးရောဂါလဲ အမြန်ပျောက်ကင်း၍ အမျိုးဘာသာသာသနာကို ကာကွယ်ဆောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ. ဗျာ…../
တကမ်ဘာလုံးသိအောငျဖွနျ့ဝပေေးကွပါ ကိုယျတိုငျလကျတှရေ့ောဂါ ပြောကျခဲ့ပွီးဆေးရုံဆေးခဏျးတှသှေားကုတယျမပြောကျပါ ငှကေုနျလူပနျး ဖွဈပွီးအိပျရာထဲမှာဘုံးဘုံးလဲပွီး သူကိုယျသူ(သေ) စာရငျးသှငျးထားတဲ့လူကို ကြှနျတျောတှလေို့ဒီဆေးမွီးတိုလေးပေးခဲ့ပါတယျ လူနာကမရုံမှာကွောကျလို့ လူနာကိုမှာခဲ့သေးတယျ။
ဒီဆေးကိုနစေ့ဉျတလတိတိသကျေဘို့နဲ့. အကယျ၍မပြောကျခဲ့သျော ဆေးဘိုးကုနျကငြှမြေားကို ကြှနျတျောမှပွနျလြျောပေးမညျ့ ဂတိလဲပေးခဲ့ပါတယျ နောကျတ.လအကွာမှာ တမိုငျလောကျဝေးတဲ့လူနာကို သှားကွညျ့တော့ လူနာကလူကောငျးဖွဈလို့. ဝလို့. စိုလို့. အံ့သွဘှယျတှခေဲ့ပါတယျ။
အဲဒီအဖွဈအပကျြကလှနျခဲ့တဲ့ နှဈ(၂)လောကျကပါ ၂၀၁၆…ခုကသှေးတိုးရောဂါကြှနျတျောမှာဖွဈတယျ သှေးခြိနျကွညျ့တော့အောကျသှေး(၁၂၀)အပျေါသှေး(၁၉၀) ပါဆရာမကဂရုစိုကျကုဘို့ပွောပွီး သှေးကဆြေးပေးခဲ့တယျ။
အဲဒီအခြိနျကတရားစခနျးပှဲကငျြးပနတေဲ့အခြိနျ တရားစခနျးအကြိုးတျောဆောငျ ဥက်ကဋ်ဌဆိုတော့ ဆေးဖျောဘို့အခြိနျကမရနဲ့. တရားစခနျးပှဲလဲပွီး အောကျဖျောပွမညျ့ ဆေးမီးတိုကို.(၁၃)ရကျနစေ့ဉျသောကျလိုကျတာ…..
ခုတော့ဗြာ မုနျ့ဟငျးခါး ဝကျသားကွိုကျတာစား ယ်ခုစာရေးနခြေိနျအထိ(ဒေါငျဒေါငျလနျ.)ဘဲဗြာကဲဆေးနညျးကလှယျလှယျလေး ….
(၁)နှားနို့စဈစဈ ၁. ပိသာ (၂)ကွကျသှနျဖွူ. (ဥတလုံး)..၇…လုံးနှားနို့ကိုဆူအောငျကွိုပါ …ပှကျပှကျဆူပွီဆိုရငျအခှနျနှာထားတဲ့ကွကျသှနျဖွူ(၇)လုံးကိုထညျ့ပါ…..
ရောဂါနုလငျြ(၁၃ )ရကျ သလေု့ဆဲဆဲလူဆိုလငျြရကျ(၃၀)…..ကြှနျတျောကတော့ဗြာ ဒီဆေးနညျးလေးကို အမြားသူငါသိအောငျ ဆကျပွီးဖွနျ့ဝစေခေငျြပါတယျ……
ဒီဆေးနညျးလေးကို ဦးနဝေငျးလကျထကျ… လုပျသားပွညျသူနစေ့ဉျသတငျးစာထဲမှာတှလေို့ရောဂါဖွဈနသေူတှကေို တှတေို့ငျးပေးပါတယျ …..ခကျတာကတခြို့ကပွောသလို မလုပျကွတာတှလေဲတှခေဲ့ရပါတယျ.။
ကိုငျးဒီစာကိုတှတေဲ့ ရောဂါပြောကျလိုသူအပေါငျး လိုကျနာဆောငျရှကျနိုငျကွပါစကေုရခကျနတေဲ့ သှေးတိုးရောဂါလဲ အမွနျပြောကျကငျး၍ အမြိုးဘာသာသာသနာကို ကာကှယျဆောငျ့ရှောကျနိုငျတဲ့ သူတျောကောငျးမြားဖွဈကွပါစေ. ဗြာ…../
စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်း ထုတ်ကြည့်မိတဲ့ ပုလင်းထဲက အရာလေး….
သူ့ကြောင့် နာမည်ပျက်တယ်ဆိုရင် သဘင်လောကက ဖယ်ရှားပစ်ပါလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဦးတိုင်းကျော်
ဆရာဝန်ညီလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဆေးခန်းကိုလာပြတာ အသက် ၂၀ ကျော်ကောင်ကလေး၊ သူ့စအိုကနေ အကောင်အရှင်လေးတွေ ….
April 17, 2019 MM Live
December 6, 2018 MM Live News
December 21, 2018 MM Live